Speaker ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်သလဲ? – ADS Myanmar Blog
Speaker ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်သလဲ?
ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေး၊ နိူင်ငံရေးနှင့် လူမူရေးတွေမှာအောင်မြင်သူအဖြစ် ရပ်တည်နိူင်ဖို့ ဆိုရင် စကားပြောတဲ့စွမ်းရည်ဟာ အလွန်ဘဲ အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းကနေပါဝင်နေတဲ့ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာ အချိန်တိုတိုအတွင်း လူတွေရဲ့ ရင်ထဲ ၊ နှလုံးသားထဲကို ရောက်အောင်ပြောနိူင်ဖို့ ဆိုတာ လွယ်မယောင်နဲ့ ခက် တိမ်မယောင်နဲ့ နက်တဲ ကိစ္စရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူတွေရှေ့ မှာ စကားပြောဖို့ အချိန်လည်း ရောက်နေပြီ ၊ ကိုယ်ပြောနေတဲ့ စကားကိုအချိန်တိုအတွင်း နားထောင်မယ့်လူတွေ အတွက်အကျိုးရှိစေဖို့ အတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ။
ကိုယ်ပြောရမယ့်ပွဲအခြေအနေကို ကောင်းမွန်စွာ ကြိုတင်လေ့လာသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ ကိုယ့်ကို Speaker တစ်ယောက် အနေနဲ့ တက်ပြောခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်ရှိပွဲတက်နေတဲ့ လူတွေ ဘယ်လို စကားမျိုးကိုပြောရင် သူတို့ အတွက် ပိုအကျိုးရှိမလဲဆိုတာကို ကောင်းမွန်စွာလေ့လာပြီးပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကို Speaker တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ပွဲတွေဆို ပိုပြီးဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ ပွဲမတက်ခင်အပြင်မှာ ကျင်းပဆိုသလို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အတွက်ကိုယ်ပြောမယ့် စကားလုံးတွေ ၊ ကိုယ်ဝတ်ဆင်ရမယ့် အကျီက အစ ကြိုတင်ကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
စကားအရှည်ကြီး ပြောတဲ့ အကျင့်ကို ရှောင်ရှားရပါမယ် ။ဒီဘက်ခေတ်က လူအများစုဟာ လူတစ်ယောက်ပြောတဲ့ စကားကို ကောင်းမွန်စွာ အာရုံစူးစိုက်နိူင်ဖို့ ( ၁၅) မိနစ်လောက်သာ အချိန်ပေးနိူင်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာမှာ အဓိက အကြောင်းအရာကိုနားထောင်သူ ရင်ထဲရောက်အောင်ပြောပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဥပမာကောင်းတွေ နှင့်ယှဉ်တွဲ ပြောသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေများနေခဲ့မယ်ဆိုရင် နားထောင်သူတွေ ငြီးငွေ့ မူမရှိစေဖို့ အတွက် ပညာတတ်ဆန်တဲ့ ရယ်မောစရာတွေ ထည့်သွင်းပြောကြားသင့်ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ ဟာသမြောက် စကားလုံး တွေကြောင့် ကိုယ့် နေရာကိုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ရောက်တဲ့အထိတိုးမြှင့်ပေးရာလည်းကျပါတယ်။
ကိုယ်စကားပြောနေတဲ့ အချိန်ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို တောင့်တောင့်ကြီးပြောနေမယ့်အစား ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာနဲ့ ရွေ့ လျားပြီး လူတိုင်းကို attention ပေးပြီးပြောတာဟာ နားထောင်သူများ အတွက် ရသမြောက်တဲ့ Performance တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၊ ကိုယ့် မျက်လုံးတွေက လည်းစဉ်းစားပြီးပြောဆိုနေတဲ့ ပုံစံမျိုးကို မပြုလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်မျက်လုံးတွေက ပရိတ်သတ်ကြားကလူတစ်ယောက်စီကို ရသမြောက်မူကို အမြင့်ဆုံးရောက်ဖို့ အတွက် ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားလုံးတွေနှင့်လိုက်လျောညီထွေမူရှိတဲ့ ခံစားမူရသအလိုက်ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့ စီးပှားရေး၊ နိူငျငံရေးနှငျ့ လူမူရေးတှမှောအောငျမွငျသူအဖွဈ ရပျတညျနိူငျဖို့ ဆိုရငျ စကားပွောတဲ့စှမျးရညျဟာ အလှနျဘဲ အရေးပါတဲ့အစိတျအပိုငျးကနပေါဝငျနတေဲ့ အခကျြတဈခကျြဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ပွောလိုကျတဲ့စကားဟာ အခြိနျတိုတိုအတှငျး လူတှရေဲ့ ရငျထဲ ၊ နှလုံးသားထဲကို ရောကျအောငျပွောနိူငျဖို့ ဆိုတာ လှယျမယောငျနဲ့ ခကျ တိမျမယောငျနဲ့ နကျတဲ ကိစ်စရပျပဲဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့လူတှရှေေ့ မှာ စကားပွောဖို့ အခြိနျလညျး ရောကျနပွေီ ၊ ကိုယျပွောနတေဲ့ စကားကိုအခြိနျတိုအတှငျး နားထောငျမယျ့လူတှေ အတှကျအကြိုးရှိစဖေို့ အတှကျ ဘာတှေ ပွငျဆငျထားသငျ့သလဲ။
ကိုယျပွောရမယျ့ပှဲအခွအေနကေို ကောငျးမှနျစှာ ကွိုတငျလလေ့ာသငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုပှဲမြိုးမှာ ကိုယျ့ကို Speaker တဈယောကျ အနနေဲ့ တကျပွောခိုငျးမယျဆိုရငျဆိုတဲ့အသိနဲ့ကိုယျ့ပါတျဝနျးကငျြမှာ လကျရှိပှဲတကျနတေဲ့ လူတှေ ဘယျလို စကားမြိုးကိုပွောရငျ သူတို့ အတှကျ ပိုအကြိုးရှိမလဲဆိုတာကို ကောငျးမှနျစှာလလေ့ာပွီးပွငျဆငျသငျ့ပါတယျ။
ကိုယျ့ကို Speaker တဈယောကျအနနေဲ့ ဖိတျချေါတဲ့ ပှဲတှဆေို ပိုပွီးဆငျခွငျသငျ့ပါတယျ။ ပှဲမတကျခငျအပွငျမှာ ကငျြးပဆိုသလို ကိုယျ့ကိုကိုယျပိုမိုပွညျ့စုံတဲ့ လူတဈယောကျ ဖွဈဖို့ အတှကျကိုယျပွောမယျ့ စကားလုံးတှေ ၊ ကိုယျဝတျဆငျရမယျ့ အကြီက အစ ကွိုတငျကောငျးမှနျစှာ ပွငျဆငျသငျ့ပါတယျ။
စကားအရှညျကွီး ပွောတဲ့ အကငျြ့ကို ရှောငျရှားရပါမယျ ။ဒီဘကျခတျေက လူအမြားစုဟာ လူတဈယောကျပွောတဲ့ စကားကို ကောငျးမှနျစှာ အာရုံစူးစိုကျနိူငျဖို့ ( ၁၅) မိနဈလောကျသာ အခြိနျပေးနိူငျကွပါတယျ။ ကိုယျပွောခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာမှာ အဓိက အကွောငျးအရာကိုနားထောငျသူ ရငျထဲရောကျအောငျပွောပွီး ကောငျးမှနျတဲ့ ဥပမာကောငျးတှေ နှငျ့ယှဉျတှဲ ပွောသငျ့ပါတယျ။
ကိုယျပွောရမယျ့အကွောငျးအရာတှမြေားနခေဲ့မယျဆိုရငျ နားထောငျသူတှေ ငွီးငှေ့ မူမရှိစဖေို့ အတှကျ ပညာတတျဆနျတဲ့ ရယျမောစရာတှေ ထညျ့သှငျးပွောကွားသငျ့ပါတယျ။ဒီလိုကိုယျ့ရဲ့ ဟာသမွောကျ စကားလုံး တှကွေောငျ့ ကိုယျ့ နရောကိုနောကျတဈဆငျ့ထပျရောကျတဲ့အထိတိုးမွှငျ့ပေးရာလညျးကပြါတယျ။
ကိုယျစကားပွောနတေဲ့ အခြိနျကြောကျရုပျတဈရုပျလို တောငျ့တောငျ့ကွီးပွောနမေယျ့အစား ကိုယျရဲ့ ကိုယျဟနျအမူအရာနဲ့ ရှေ့ လြားပွီး လူတိုငျးကို attention ပေးပွီးပွောတာဟာ နားထောငျသူမြား အတှကျ ရသမွောကျတဲ့ Performance တဈခုဖွဈပွီး ၊ ကိုယျ့ မကျြလုံးတှကေ လညျးစဉျးစားပွီးပွောဆိုနတေဲ့ ပုံစံမြိုးကို မပွုလုပျမိဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ကိုယျ့မကျြလုံးတှကေ ပရိတျသတျကွားကလူတဈယောကျစီကို ရသမွောကျမူကို အမွငျ့ဆုံးရောကျဖို့ အတှကျ ကိုယျပွောတဲ့ စကားလုံးတှနှေငျ့လိုကျလြောညီထှမေူရှိတဲ့ ခံစားမူရသအလိုကျပွောငျးလဲသငျ့ပါတယျ။
Author elijahhtangPosted on December 1, 2015 Categories Lifestyle, OtherTags Speaker ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်သလဲ?
Previous Previous post: ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကဏ္ဍတွင် နိူင်ငံခြားသားများဝင်ရောက်ကြည့်ရူမူပိုမိုမြင့်တတ်
Next Next post: Like ပြုလုပ်စုစည်းထားပြီး စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်နိူင်မည့် အစီအစဉ်အသစ် ads.com.mm မိတ်ဆက်